Madaxweynaha Real Madrid oo 4 Sano cusub ladoortay. – Cayaaraha dunida
Madaxweynaha Real Madrid oo 4 Sano cusub ladoortay.
Madaxweynaha wakhtigan ee Real Madrid, Florentino Perez ayaa xilka sii hayn doona afar sannadood oo kale, kaddib markii ay cidi kula tartami weyday doorashada madaxtinimada kooxda.
Guddida u xil-saaran qabashada codsiyada murashaxiinta madaxtinimada Real Madrid u tartamaysa ayaa waawey qof aan ahayn madaxweynaha wakhtigan ee Perez oo soo gudbiya codsi uu doonayo inuu kula tartamo, sidaas daraadeedna waxa madasha ku kaliyeystay Florentino Perez oo si toos ah loogu doortay hoggaaminta Real Madrid markii saddexaad ee xidhiidh ah.
Sannadkii 2000 oo hadda laga joogo 17 sannadood ayuu Perez noqday madaxweynaha Real Madrid, waxaana markii uu xilka dhamaystay kala wareegay Calderon, hase yeeshee, waxa uu kusoo noqday kursiga sannadkii 2009 oo aan illaa hadda cidi ka qaadin.
Perez oo sannadihii u dambeeyey ay kooxdiisu ku tallaabsatay guulo waaweyn, ayaa ay da’diisu tahay 70 jir, waxaana afarta sannadood ee hadda loo kordhiyey uu ku dedaali doonaa inuu sii kordhiyo guulaha waaweyn ee uu hantiyey. Hase yeeeshee, waxa laga sugayaa inuu maalmaha soo socda qaado tallaabooyin uu ku dardar gelinayo kooxda, isla markaana uu kusoo kordhinayo ciyaaryahanno cusub, iyadoo la aaminsan yahay inuu ka tegayo Ronaldo, laakiin beddelkiisa aan la go’aaminin, iyadoo loo badinayo inay u dhaqaaqi doonaan Kylian Mbappe.